एजेन्सी । यौन सम्बन्धको बारेमा हजारौं अध्ययन र अनुसन्धान भएका छन् । यसैक्रममा एउटा अर्को अध्ययन पनि भएको छ कि यौनसम्पर्कका बेला महिलाहरु किन आँखा बन्द गर्छन अध्ययन भन्छ ।
आज अन्तर्राष्ट्रिय कन्डम दिवस तर, प्रयोग गर्ने नेपालीको संख्या ८ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौँ । हरेक वर्ष फेब्रुअरी १३ का दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय कण्डम दिवस आज मनाइदै छ । यौन सम्पर्कका लागि सुरक्षित मानिने कण्डम दिवसको लागि यो वर्ष ‘सेफर इज फन’ नारा तय गरिएको छ ।
एक जना जापानी नागरिकलाई ७० जोर जुत्ता चोरेको आरोपमा पक्राउ गरियो । थोत्रा जुता सुँघेर उनी यौन आनन्द लिने गर्थे । यही प्रयोजनको लागि उनी महिला र पुरुषका जुत्ता चोर्ने गर्थे ।
यस्ता छन् कण्डमको बारेमा ८ अनौठा तर रोचकतथ्यहरु
तपाईलाई मन पर्छ वा पर्दैन तर कण्डम एक आवश्यकता हो । यो एक त्यस्तो चिज हो जसलाई तपाईले प्रत्येक चोटि यौनसम्पर्क गर्दा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
यौनवर्धक भियाग्राको प्रयोग कति उचित ?
सम्भोग गरिसकेपछि पीडा हुन्छ ?
एजेन्सी । सम्भोगपछि पीडा हुने समस्याबाट कैयौँ महिला गुज्रिरहेका हुन्छन् । अहिलेको अवस्थामा यो त्यति ठूलो चिन्ताको विषय नहुन सक्छ । तर, यसलाई नजरअन्दाज भने गर्नुहुँदैन ।